Inkqubo yokuShukumiseka koDonga oluShukumayo | Doorfold
Khupha isisombululo se-Stose-Stose ye-Acoustic Supecial Systems Systems Ukusukela ngo-2004.
Ukutyibilika kokwahlula udonga
Ukuqulunqa udonga lokwahlula
Izahlulo zeGlasi ezinokushukumiseka
Ingcali yesisombululo esiguquguqukayo
Ngaphezulu kweminyaka eli-15 yamava esinqeni kwaye
Iindonga zokutsala iindonga kunye neendonga ezinokususwa.
Injongo yethu kukwanelisa abathengi bethu ngokuchaneka okuphezulu kunye nokuthenjwa ukuqinisekisa ukuba wonke umthengi unokuziva ekhululekile kwaye eqinisekile ngeempahla zethu kwizicelo zawo kwimakethi. Baneempawu ezininzi ezigunyazisiweyo kunye nesicelo.
Isiseko isisombululo seWindows / inqanaba ekupheleni komenzi wodonga evela eTshayina
Ungawenza njani unxibelelwano olugqibeleleyo nephaneli ye-bulb ukuba kukho i-windows okanye inqanaba kwicala lokuphela kodonga, umnyango wecango kukubonelela ngezisombululo eziguqukayo!Umvelisi kunye nomthengisi: udonga lwendlu yendluIcango icwangcise isisombululo seWindows / inqanaba lokuphela komenzi wodonga oluvela eTshayina
I-Doorfold Sliding Glass Partitions I-Ofisi ekhawulezayo Dropshipping
Icango inikezela abathengi behlabathi abashukumayo kwiglasi yeglasi yeglasi kunye neendonga zesahlulelo seglasi ye-ofisini, nxibelelana nathi kwisisombululo esinye& ikowuti.
Professional Various iinketho Panel sigqibe kbavelisi Workshop Doorfold kaThixo
Iinketho eziliqela esiphelweni Panel Doorfold Professional kbavelisi Workshop Doorfold kaThixouhlobo Gqiba ukuze panel: Ilaphu / Textile, Ithwathwa Izakhiwo, HPL, MDF / Melamine, Paint Glass, Wood ngokwenene / Ukupeyinta, ibhodi emhlophe njlNomakhi kunye Supplier: Doorfold Ukuphula WallUmnyango : Umenzi abanamava kunye nobungcali Quality Higher and Higher Sound zokuvala ezinokususwa zithengiswe ukuhlawula iinkqubo udonga lothango ne China ulwazi Based.More nceda uqhagamshelane: Mr.Wen Allen (Umnini kunye engineer)Doorfold Best iinketho ezahlukeneyo esiphelweni Panel kusuka Doorfold xa Workshop Company - Doorfold
iifreyiti zokwenza iglasi ukuze zingasebenzi
Iindonga zerediyo zeglasi engafakwanga i-ofisi. Le mveliso inemveliso engezantsi yegesi eyingozi kwindalo esingqongileyo. Ingadlala indima ebalulekileyo ekunciphiseni i-carbon yonyawo. Icango lenziwa lisebenzisa izixhobo ezinobuchule kunye nezixhobo ngokwendlela yentengiso yamva nje& izitayile. Imveliso ayiqukethe izixhobo eziyityhefu ezinje nge-mercury kunye nezinye iinyibilikisi eziyingozi kwindalo. Inemigqaliselo yemichiza enoxanduva lombala wokukhanya kwayo, ongenabungozi kubasebenzisi kunye nokusingqongileyo.
IsikoI-Acoustic Ponel kunye nodonga olususayo, siya kuhamba kuyo yonke inkqubo yokudala isisombululo, ukusuka kunxibelelwano lwentengiso, uyilo, ukwenziwa, ukuthunyelwa kunyango.
Sinikezela nge-CAD kunye ne-3D yoyilo. Senza izigaba ezintathu ze-QC ukuqinisekisa umgangatho wemveliso.
Sisoloko silandela imigaqo esemgangathweni yenkqubo yemveliso engqongqo, yokonga ixesha kunye neendleko zawo omabini amaqela kwaye kuzisa izibonelelo eziphezulu.
Sikwamkela ngokufudumeleyo ukuba utyelele umzi-mveliso wethu ukuze ufunde ngethu Iphaneli ye-acoustic kwaye Udonga olususayo Iimodeli zemveliso kunye nemveliso.
Umphathi wethu weProjekthi oya kusikhokela kwaye agcine le projekthi kwaye eqhuba ngokuchonga izixhobo ezifunekayo, ecwangcisa kwaye enxibelelana nawe kwikhontraktha ngokubanzi;
Siza kuphonononga uhlahlo-lwabiwo mali, iiplani kunye nemizobo, kunye nokuqhuba indawo& Uvavanyo ukumisela umda kunye neemfuno zeprojekthi ukukhuthaza eyona ndlela ilungileyo;
Umphathi wethu weProjekthi uya kukhokela kwaye agcine le projekthi kwaye eqhuba ngokuchonga izixhobo ezifunekayo, elungiselela.
Singene ngokupheleleyo kwimveliso yemveliso yabathengi bethu. Kodwa asizisi nje kwiimpawu ezithile zecandelo; Sikwachaphazela kakhulu kwimibuzo enje: "Yintoni eyenza abathengi bethu bavuyelwe?" "Singayenza njani into yokuthenga isiphelo somthengi?" Yile nto siza kuyenza nawe. Le yindlela esiyijika ngayo kwiprojekthi yethu.
Funda malunga neemveliso esizenzelwe wena, njengeUkugoba udonga lokwahlulahlula kwayeudonga lokwahlula-hlula, njl., kwaye uya kuziva uyilo lwethu ngononophelo.
Indawo yeLifa leLifa leMveli kumgangatho wesibini weDammam Saudi Arabia
Ityala elinxulumene noko
IHOTI yeTIANYUAN (XIAMEN) -GRAND BANQUET HALL (P1 & P2)
Ihotele zeFuqing Yonghong Hotspring
Umnyango wecango yinkampani ehlawula ingqalelo eninzi kumgangatho wemveliso. Ukusuka kwizinto eziphezulu zokukhetha, uyilo, ukugqiba iphakheji, sihlala silawula ngokungqongqo ngelixa iSebe leMveliso yeHlabathi.
BethuUdonga olususayoIimveliso zingqineke zithatyathwa kuvavanyo lwexesha kwaye zidume ngokubanzi phakathi kwabathengi abanamabani iihotele zeenkanyezi, izixhobo ezidumileyo njalo njalo. Ukuza kuthi ga ngoku, sidlulise isiqinisekiso semigangatho ye-ISO 9001.
Ngaphezulu kweminyaka eli-15 yamava kwiindonga zesahlulelo kunye nendlela yokuzimela ishishini,Iphaneli ye-acoustic yesiqhelo, Amacango aqokelele amava acebileyo kunye nobuchule bokubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni kwaye aqinisekise ukuba abathengi bafumana eyona nkonzo ifanelekileyo ukufezekisa iimfuno ezithile.
Wamkelekile ukuba uza kutyelela umzi-mveliso wethu okanye uthumele imibuzo malunga namaxabiso eemveliso ezifanaUkugoba udonga lokwahlulahlulakunye nodonga lwesahlulo seselula nangaliphi na ixesha.